Cali Yare oo weji gabax kala kulmay Militariga diidan muddo kororsiga | Dhacdo
Home Wararka Maanta Cali Yare oo weji gabax kala kulmay Militariga diidan muddo kororsiga
Cali Yare oo weji gabax kala kulmay Militariga diidan muddo kororsiga
Gudoomiye Kuxigeenka Dhinaca Amniga ee Maamulka Gobolka Banaadir, Cali Cabdi Wardheere (Cali Yare) ayaa ku hungoobay inuu dhaqaale u adeegsado Ciidamada Militariga ee difaaca kaga jira Degmada Hodan ee Gobolka Banaadir, isla-markaana diidan muddo kordhinta Hay’adaha Dowladda Federaalka.
Ciidamadan oo ka tirsan Guutada 7aad ee Qaybta 60aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa gurmad ahaan u yimid Magaalada Muqdisho, intii uu socday weerarkii Ciidamada Haramcad iyo Booliska Gobolka Banaadir ku qaadeen hoyga Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, oo ku yaala nawaaxiga Madaxtooyadii hore ee Cabdiqaasim Salaad Xasan ee Degmada Hodan.
Waxaa la fahamsan yahay in Guutada 7aad ay fashilisay hawlgalkii Dowladda Federaalka ku dooneysay in lagu soo qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Odayaal ka socday dhanka Cali Yare ayaa gelinkii dambe ee Khamiistii la kulmay Saraakiil ay ka mid yihiin Taliyaha Ururka Gurmad ee Guutada 7aad, Faarax Xasan Xaashi (Faarax Jareer) iyo Liibaan Madaxweyne.
Ururka Gurmad ayaa ka hawlgelayay deegaanka Leego ee Gobolka Shabellaha Hoose, ka hor intii aanay habeenimadii Axadda gurmadka ugu imaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaa uu weerarku ku socday.
Odayaasha ayaa Saraakiishan ugu baaqay inay xeryahooda dib ugu laabtaan, isla-markaana ay qaataan qidmad lacageed oo Cali Yare uu sheegay inuu siin doono, haddii ay ku laabanayaan xeryahooda.
Mid ka mida odayaashii la kulmay Saraakiisha Militariga ayaa Dhacdo.com u sheegay inay Saraakiishaasi ka hor timid yoolkii ay ugu taggeen.
Faarax Xasan Xaashi (Faarax Jareer), Taliyaha Ururka Gurmad ee Guutada 7aad ayaa dhankiisa xaqiijiyay inay la kulmeen dhowr odayaal ahi, oo uu soo diray Cali Yare.
“Waxba nagama aysan qarin, si cad ayay noogu sheegeen haaf milyan dollar ($500,000) qaata, dhufeysyada baneeya, dibna ugu laabta xeryahiina.” Ayuu yiri Faarax Jareere oo Dhacdo.com u waramay.
Faarax Jareere ayaa yiri “Hadafka aan u nimid maaha inaan lacag soo doonanay, waxaan u nimid inaan ka hortagno muddo kordhinta sharci-darrada ah, ugana hortagno dhibaatada ay arrintaasi keeni karto. Iyadoo lacagba nala siin anagaa dib ugu laaban doono saldhigyadeenii, marka aan aragno in doorasho la qabanayo.”
Ma cadda sababta uu Cali Yare lacagta ugu gorgorinayo Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee garabka u muujiyay Midowga Musharaxiinta, waxayse tani imaanaysaa xilli uu weli kala shaki ku kala dhex jiro Dowladda Federaalka iyo Midowga Musharaxiinta, inkastoo ay horumar ka sameeyeen arrimaha taagan.
Previous articleGudoomiyaha Degmada Baraawe “Isku day dil ayaan ka badbaaday”
Next articleCiidanka Xoogga Dalka oo hawlgalo ka fuliyay Shabellaha Hoose (SAWIRRO)